Ukubhukisha ihotele kwi-intanethi ngexabiso elihle, musa ukuhlawula ngaphezulu ngeeholide zakho
Sebenzisa injini yokukhangela ukuya Bhukisha ihotele yakho
Ngaba ucinga ngokuthatha uhambo kwaye ungazi ukuba ungaqala ngaphi? Ewe, njengoko amabali amnandi esitsho, siza kuyenza kwasekuqaleni. Enye yeengxaki zokuqala esinazo kukuba bhukisha iihotele. Ngaphandle kwamathandabuzo, sihlala sifuna fumana iihotele ezingabizi kakhulu Ezineemeko ezigqibeleleyo ukuze ukuhlala kwethu kungalibaleki. Namhlanje sikunceda ngayo!
Cofa apha ukubhukisha ngamaxabiso asezantsi kwi-Intanethi
Ungazifumana njani iihotele ezingabizi kakhulu kwi-intanethi
Xa kufikwa ekukhangeleni ihotele elungileyo kwikhefu lethu elilandelayo, akusayi kubakho mfuneko yokuba sichithe iiyure sijonge kwelinye icala okanye kwelinye. Ngoku ungagxila kuyo yonke imizamo yakho kweminye imisebenzi eyonwabisa ngakumbi.
Ukuba awunayo ihotele ethile engqondweni, zivumele ukhokelwe sithi injini yokukhangela ehotele. Kule meko, iya kuba yeyona ndlela ikhawulezayo kunye neyona ilula kwaye kufuneka ufumane lonke ulwazi ngonqakrazo olunye.
Olunye ukhetho lokufumana ihotele eziphezulu Kukwiarhente nge-intanethi. Ewe, kwakhona, kuya kufuneka ucinge ukuba xa kukho abalamli beli hlobo, amaxabiso aya kunyuka.
Unako yiya kwiphepha lehotele Ewe kunjalo, ngamanye amaxesha, abahlali bekubonelela ngezibonelelo okanye amaxabiso esinokubona sonke.
Amanyathelo asisiseko okufumana iihotele ezingabizi kwi-Intanethi
Amaqela: Ngenxa ye yenza ugcino, Kuhlala kulungile ukufunda indawo encinci apho siya khona kwiholide. Khangela ulwazi kwimeko apho kukho naluphi na uhlobo lomsitho kuloo ndawo ikhethiweyo. Kungenxa yokuba ukuba kunjalo, amaxabiso aya ebiza kakhulu.
Iidolophu ezikufutshane: Ukuba ekugqibeleni uyifumene, kwezi imihla yeholide zakho, indawo ekuyiwa kuyo ipati kuba kuya kufuneka ujonge enye indlela. Eyona mbono ilungileyo kukukhetha iidolophu ezikufutshane. Ngale ndlela, siya kuba kufutshane kwaye sichithe imali encinci ehotele.
KwangaphambiliNgaphandle kwamathandabuzo, xa sele sazi kwaye sicacile malunga nokuba siza kuya phi, kuya kuba kuhle ukuba sibhukishe kungekudala. Ukuqhubela phambili kunokusisindisa ekuphumeni kwigumbi lamaphupha. Jonga konke ukubandakanya iihotele okanye ngesidlo sakusasa nje. Ndiyabulela koku, ngoku sinokukhetha ngokusekwe kwiimfuno zethu.
Iihostele okanye ipenshini: Sele siyazi ukuba sonke sinako phupha ngehotele enkulu, kodwa ngokuqinisekileyo uninzi lwethu, luya kuphuma kuhlahlo-lwabiwo mali. Ke lixesha lokuba ubeke iinyawo zakho emhlabeni kwaye ujonge ezinye iindlela. Ukuba uza kuchitha usuku lonke usuka kwenye indawo uye kwenye, kungcono ukhethe izibonelelo zehotele. Okona kulungileyo kuya kuba kwezi ndawo zibizwa ngokuba ziihostele okanye ipenshoni. Iindawo ezifanelekileyo zokuhlamba nokuphumla iiyure ezaneleyo.
Abantwana basimahla: Ukuba uhamba nabantwana, kufanelekile ukuba ujonge ezo ndlela zisivumela ukuba sinciphise amaxabiso. Kuxhomekeka kubudala, zininzi ixabiso eliphantsi kwiihotele Abayi kukuhlawulisa ngokulala egumbini elinye. Kufuneka ujonge umgaqo-nkqubo weemeko.
Ungayibhukisha njani ihotele kwi-Intanethi?
Namhlanje sinethamsanqa lokuba ne-intanethi. Ngaphandle kwamathandabuzo, esinye sezixhobo ezilungileyo zokwenza ubomi lula. Xa siseluhambeni, sikwabona isibhakabhaka esivulekileyo kuso. Ufuna bhukisha ihotele kwi-intanethi? Ewe, yeyona ilula.
Ukuba sele ujonge kwaye sele unayo ihotele oyifunayo kwiholide yakho, inyathelo elilandelayo kukwenza ubhukisho. Ukuze singenzi ukujika okuninzi okungenangqondo, sikhethe ukukhangela ihotele (Cofa apha ukufikelela kunye nokubhukisha ngexabiso elifanelekileyo). Uya kusenzela wonke umsebenzi. Kufuneka nje singene kwindawo ekuyiwa kuyo kwaye kunjalo. Ukuba uyikhethile, uya kuza nezinto ezininzi iinketho zehotele. Phakathi kwazo ungabona zonke iimpawu zayo. Ukusuka kwindawo eya kwimifanekiso ebukhali ukufumana umbono. Nje ukuba wenze isigqibo, kuya kufuneka ukhethe eyona ikuqinisekisayo. Ngokucofa olu khetho, uya kufumana iphepha elitsha oza kuba nakho khetha igumbi. Apho ungakhangela zonke ezo zisimahla kunye neentsuku ezikhoyo. Lonke olu lwazi, unokulukhetha ngendlela elula kakhulu nakwisofa yakho. Xa unento yonke egutyungelweyo, kuya kufuneka ucofe ukwamkela kwaye ukubhukisha kuya kusebenza.
Ukuphononongwa kweehotele kwi-intanethi
Olunye ukomelela xa usenza ugcino ehotele kukufunda kancinane izimvo ezishiya abathengi. Ewe akusoloko kuchanekile kwaye, kwimeko yeencasa, akukho mntu uphetheyo. Okwangoku, unokufumana umbono wezona zinto ziqhelekileyo kwindawo oyikhethileyo. Njengomgaqo ngokubanzi, izinto ezinjengokucoceka nengxolo zihlala zixoxwa. Mbini amanqaku aphambili xa kuziwa ekukhetheni indawo enye okanye enye.
Kwelinye icala, kubalulekile ukuba bane Ulwamkelo lweeyure ezingama-24. Ngaphezu kwayo nantoni na kuba asazi ukuba siza kufika nini kwaye kanye kuloo ndawo, ngokuqinisekileyo siya kuba nexesha elingaphezulu ngaphandle kunangaphakathi. Kwangokunjalo, kubalulekile ukubuza ngezixhobo kunye nokusetyenziswa okuhle okwenziweyo ngazo. Siza kukufumanisa oku kuvavanyo kwi amagqabantshintshi. Ngamanye amaxesha kungcono ukhethe ukuchitha ixesha elincinci ufunda, njengoko uza kubona ukuba ulwazi luqala ukuziveza njani. Yindlela efanelekileyo yokufumana umbono wendawo, ngaphambi kokuba ube lapho.